सुरबीर योद्धा, कायर गीतकार – Rastriya Yuvajagaran Nepali News
सुरबीर योद्धा, कायर गीतकार
मा प्रकाशित | कला/साहित्य, प्रदेश नं १, फिचर, रंगमञ्च
सरकारी जागिर खान्छ उ, बिस पच्चीस हजार कमाउँछ
कसरी उसले शहरमा ठुल्ठुला दरवार बनाउँछ ?
बैसठ्ठी त्रिसठ्ठी साल तिर आफ्नो पहिलो अल्बम “किन किन” निकाल्न अघि आफ्नो एल्बममा राख्ने सम्भावित एउटा गितको शब्द आफ्नो एकजना कर्मचारी साथीलाई सुनाए राजन राईले । केहि बेरको मौनता पछि ति इमान्दार कर्मचारी साथीले गम्भीरता पुर्बक भने’– ‘भो यो गित तपाईले नानिकाल्नोस् । तपाई चुनाव लड्ने मान्छे तपाईलाई यो गीतले सिध्याउछ ।’ चुनाव लड्न टिकट खोजि रहेको राजन टिकटसँग डराए । टिकट पाएँ पनि आफ्नैले हराउँछन कि भनेर चुनावसंग डराएँ । डरै डरमा उनले यो गित रेकर्ड गरेनन् । तर, त्यही एल्बममा अन्जु पन्तले गाएको “जिन्दगी यो फुलै फुलको थुंगो हुँदैन, फक्रने र ओईलाउने टुंगो हँुदैन’ स्रोताको ओंठ–ओंठमा झुण्डियो । उनको दोश्रो एल्बम् ऐठनमा समाबेश
“ऐठन होला होला जस्तो लाग्यो
बहुलाउँछु कि झैँ पनि लाग्यो
चुले निम्तो पठायौ तिमीले जब
तिम्रै सिन्दुर पोते हुने दिनको”
राजेश पायल राईको स्वरमा रेकर्ड गरिएको यो गीतलाई पनि निक्कै श्रोताहरुहरुले रुचाए । तेस्रो एल्बम ‘अक्षर र आवाज’ को महिला समानताका निम्ति लेखिएको,’ पिरमा पनि हाँस्न सक्छे एउटी छोरी मान्छे, दुःखमा पनि बाँच्न सक्छे एउटी छोरी मान्छे । भिडियो बने यो गित पनि हिट हुने कुरामा राजन विश्वस्त छन् । संजोक के छ भने यी तिनै गीतका संगीतकार राजनराज शिवाकोटी हुन् । राजन राई सुन्दर शब्द शिल्पी हुन् । उनको शब्दमा छुटै मौलिकता पाईन्छ । संगीतकार महेश खड्काले संगीत गरेको तथा गायक÷गायिका रामचन्द्र काफ्ले र मिलन नेवारले गाएको यो गितसँग पनि रचनाकार राई निक्कै आशावादी छन् ।
“गाऊँ घरैमा ए लै लै पँधेर्नीको गाग्रो गुलेलीले फोरेको
बाँसका झ्याङ्गमा खाल खालका बुट्टा हामी दुवैले कोरेको
बिर्सेऊ होला नि ए लै लै अहिले झैँ लाग्छ हामीले काक्रो चोरेको ।”
रचनाकार प्रेम, बिरह, समानता, बिद्रोह सम्बन्धित हरेक प्रकारका गितहरु लेख्छन । उनले संगीतकार डाक्टर किराँत र गायक कनकाईष्ट राईसँग तयार गर्दै गरेको गोर्खा फौज सम्बधि एउटा गित अहिले लगडाउनमा फसेको छ । गीतमा दोश्रो बिश्वयुद्ध कालका गोर्खा फौजलाई सम्झँदै राईले लेख्छन्–
गीतकार मुख्य रुपमा राजनैतिक कर्मी हुन् । उनकै शब्दमा आफुलाई रहरे गीतकार भनेर चिनाउने राजन राई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रिय सदस्य तथा प्रदेश नम्बर १ का सांसद समेत रहेका छन् । नेपालको कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा मिचेर भारतले सडक बनाएपछि उनको पहिलो एल्बमको गित अहिले चर्चामा छ–
शान्तिका सेता परेवा लडाईमा काला अरिंगाल हौ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका कार्यकर्तालाई अरिंगाल बन्न निर्देशन दिएको सन्दर्भमा यो गित लेख्नु भएको हो ? भनि प्रश्न गर्दा हाँस्दै राई भन्छन– ‘होइन । ’cause मैले उक्त गित लेखेको १३/१४ वर्ष भईसक्यो भने प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनु भएको एक डेढ वर्ष भयो होला । फेरी प्रधानमन्त्रीले ‘अरिङ्गाल मात्रै भन्नु भएको छ भने मैले गितमा काला अरिङगाल भनेको छु ।
गितकार राई कोमल गितकार मात्र होइनन् सशक्त योद्दा पनि हुन् । प्रतिगमनका विरुद्ध उनको संघर्षलाई उनका समकालिनहरुले अहिले पनि सम्झने गर्दछन् । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिँदा पहिलो दिनै सडकमा उत्रिएर राजाको कदम विरुद्ध रत्नपार्कमा भाषण गर्ने राई २०४६ पछाडि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा साढे तीन महिना जेल समेत परेका छन् । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमा अनेरास्ववियुको तर्फबाट आन्दोलन परिचालन कमिटीको केन्द्रीय संयोजक समेत रहेका राई अहिले भ्रष्टाचार सतहमा देखा परेको बताउँछन् । अबको लडाई भ्रष्टाचार विरुद्ध हुनुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन–“भ्रष्टाचार १० प्रतिशत होइन, ५० प्रतिशत होइन कुनै कुनै ठाउँमा त २०० प्रतिशत बृद्धि भएको छ । भ्रष्टाचारीहरुले सरकारी रकममा मात्रै नभएर जनताबाट समेत लुटेका छन् । राई भन्छन–“अब म पहिला जस्तै टिकट र चुनावसँग डराउँदिन, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरुको पर्दाफास गर्छु ।”
ट्याग Rajan Rai Song
पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ ज्येष्ठ २० गते (सन् २०२० जुन २ तारिख) मंगलबार, ॐ गणः गणपताय नमः